Nhazi ọhụrụ China Site na APP enyi cupstock (EPP ntekwasa) Food Grade Bio de-gradeable paper factory and suppliers | Akwụkwọ doro anya
ihe ohuru site na APP enyi na enyi cupstock (EPP kpuchie) Akwụkwọ Grade Bio de-gradeable paper
1）Teknụzụ mkpuchi mkpuchi okpukpu abụọ, akwa ọ bụla nwere onyinye ọrụ dị iche iche
2）Mkpuchi mkpuchi bụ ihe nwere ike ime mmiri dị 100%, kọntaktị nri ozugbo, dị nchebe
3）Enwere ike ịgwọ oyi akwa mkpuchi na igwe akwụkwọ (FK1+ oyi akwa) ma ọ bụ mkpuchi ahịrị
Kedu ihe bụ EPP?
1） EPP bụ mkpụmkpụ okwu Bekee atọ: Polymer Protection Environment, ọ bụ koodu nke ngwaahịa ọhụrụ anyị (Zero plastic ma ọ bụ plastik efu efu), dị ka GCU, bụkwa teknụzụ ama ama nke anyị mepụtara na NAPPEPP.
2, Teknụzụ na -elekwasị anya teknụzụ mkpuchi pụrụ iche nke na -enye ọmarịcha iko ọmarịcha arụmọrụ, mmiri ma ọ bụ nguzogide mmanụ, mbugharị dị ala (ihe onunu), isi dị ala.
3, EPP anyị na-elekwasịkwa anya isi atọ dị n'ahịa: enwere ike ịghagharị (A na-emegharị ya na akwụkwọ ma ọ bụ iyi bọọdụ), ihe na-emebi emebi, na-emebi emebi.
Nhazi EPP na TSD
：EPP nhazi na TSD
Kedu ihe kpatara ịhọrọ EPP?
1) Plastik dị ebe niile!
2) Iji bụrụ onye otu ụwa, onye ọ bụla nwere ọrụ ime ihe
3) Iji bụrụ onye na -ede akwụkwọ, anyị kwesịrị ime sth., Anyị nwere ikike ịme ihe
4) Ka anyị bụrụ nnukwu mkparịta ụka na akwụkwọ akụkọ n'ụwa, anyị kwesịrị ime ihe
Akwụkwọ Iko - Onye nwe akara na Nkwupụta nchịkwa
Nrụgide na -abawanye site n'aka ndị nwe akara na gọọmentị maka iji ihe ọhụrụ dochie PE
Ịbawanye mkpa maka imegharịgharị ihe
※ Iji ihe ndị na-emegharị emegharị
※ Iwepụ mmetọ nri
Kedu ihe kpatara EPP nwere ike ichebe ụwa (Onwe anyị)?
Iji nweta ọrụ akara na ọrụ mgbochi mmiri na -enweghị PE
Anyị na -ewepụ plastik (PE) site na iko a rụchara (Mba PE, na -enye otu ọrụ), iko emechara abụghị plastik+ akwụkwọ.
Ihe anyị na -eme bụ ịkwalite mbibi gburugburu ebe obibi
Ozi EPP anyị
1, Ihe ịma aka anyị bụ isi bụ ibelata na iwepụ ihe mkpofu anaghị arụ ọrụ.
2, ebumnuche anyị bụ imepụta ihe na -enyere azịza nkwakọ ngwaahịa na -adigide aka
ndụ anyị kwa ụbọchị.
LDPE mmepụta ihe zuru ụwa ọnụ ca. 25million tọn
- China: 3.5million, 14.5%
- USA: 13.3%
- Japan: 5.2%
Manufacturers Ndị nrụpụta Top3:
√ China chọrọ ca. 5.5million/a
Iko akwụkwọ zuru ụwa ọnụ LDPE chọrọ ca.
0.7 nde/a, CN ihe dị ka 0.2m/a
AKWỤKWỌ na ỤBỌDỤ
1, Maka ngwa nkwakọ ngwaahịa, teknụzụ mkpuchi mkpuchi EPP anyị na -adigide bụ ezigbo ngwọta maka yinye uru niile, yana ọpụrụiche na arụmọrụ pụrụ iche.
2） Mepụta textures dị mma iji dabara njirimara njirimara gị
3, Nkwakọ ngwaahịa na -agbaso ụkpụrụ kọntaktị nri
4, Ngwaahịa nke na -emeju ihe mkpuchi mkpuchi
Teknụzụ EPP VS PE ọdịnala na PLA
Kedu ka EPP si arụ ọrụ na asambodo ya
Nke gara aga: elu mma china N'ogbe recycled ahaziri logo biri ebi corrugated akwụkwọ igbe igbe
Osote: Akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa nri kpuchiri gburugburu (OPB) sitere na APP
Akwụkwọ kọfị kọfị
akwụkwọ na -emebi emebi
EPP kpuchie akwụkwọ iko
akwụkwọ nri nri
iko akwụkwọ na -ekpo ọkụ na oyi
ọ dịghị PE ntekwasa akwụkwọ cup
Mpempe akwụkwọ na Logo